एकबारको जुनीमा मानिसमध्ये मलाई सबैभन्दा मन नपर्ने मानिस राजा हो । यसको कारण कटु अनुभवहरुले भरिपूर्ण छ । म गाउँमा जन्मिएँ, गाउँमै हुर्किएँ,। मेरो गाउ“ राजाको दरबारदेखि धेरै टाढा थियो । गाउँमा मलाई राजा कतै दूर देशका कथाको अजीवको पात्रजस्तो लाग्थ्यो । अग्लो सिंहासनमा बस्ने, शिरमा हीरामोति जडेको श्रीपेच लाउने । आफूमाथि हात्ती-घोडामा सवार हुने, अरुलाई तल धूलीकण देख्ने । आफूलाई विष्णुको औतार मान्ने, अरुलाई भुसुना सरी ठान्ने । कामको नाउँमा सिन्को नभाँच्ने, तीन छाक मासुभात र दूधभात खाने । दरबारबाट बाहिर निस्क्यो कि धर्ती र आकाश सबै कब्जा गर्ने । यसो सुन्दा यो सब कथिएको कथाजस्तो लाग्थ्यो मलाई ।
ठिटौलो उमेरमा काठमाण्डों आएर जब राजालाई प्रत्यक्ष बेहोरेँ, मलाई यो जन्तु त मापाको रहेछ भन्ने लाग्यो । कथामा भनिएझैँ दरबारबाहिर निस्कँदा सबै उसको हुने । धरती उसको, आकाश उसको । बोली उसको, तजबीज उसको । राजा शिर ठाडो पारेर हि“ड्ने, प्रजाहरुले शिर निहुराउनु पर्ने । राजा सिङ्गै सडक कब्जा गर्ने, प्रजाहरु धूलोका कणसरी किनार लाग्नुपर्ने । राजा मनपरी हुकुम दिने, प्रजाले चुपचाप हुकुम मान्नुपर्ने । नमाने ज्यान जाने । राजा वैभवको पौलमाथि विलासको जीवन जिउने, प्रजाहरु भोकले, जाडाले, रोगले मर्ने । प्रजाहरुका आँसु राजाको सुस्वादु मदिरा, प्रजाहरुको क्रन्दन राजाको सुमधुर सङ्गीत । राजालाई सुखैसुख, प्रजाहरुलाई दुःखैदुःख । यो धरती राजाको भूस्वर्ग, प्रजाहरुको सरासर नर्क ।
जब सडकमा राजाको सवारी हुन्थ्यो, मलाई त्यसैत्यसै निसास लागेर आउँथ्यो । दुबै पेटीभरि लस्करदै बन्दुके फौजी छन् । आफूलाई लखेटेर भित्तामा पुर्याएको छ । छिसिक्क हलचल ग¥यो कि गोली ठोक्ला भन्ने डर । राजा निस्केपछि थप्पडी बजाउनु पर्ने । नबजाए मार्लान् भन्ने डर । राजाको जयजयकार गर्नुपर्ने । नगरे सास निभाउलान् भन्ने भय । त्यही बेला मलाई भित्र कताकता लाग्यो, यो राजा भन्ने जन्तुलाई धूलामा नपछारी यो जिन्दगीको कुनै अर्थ छैन । राजाको कमारो भएर जिउनु पनि के जिउनु † यो त मरेको जुनी पो हो ।
बस्, जो राजको विरोध गर्छ, लुकिछिपी म उसको समर्थनमा लागेँ। कहिले कांग्रेसको समर्थनमा, कहिले कम्निस्टको समर्थनमा । भूमिगत आन्दोलन भए, भूमिउपर आन्दोलन भए । शान्तिपूर्ण आन्दोलन भए, हिंसात्मक संग्राम भए । मैले जीवनको पेटीमा उभिएर तिनलाई सलाम गरेँ । मैले तिनलाई सक्दो सघाएँ । आन्दोलनको हुरी चल्यो । क्रान्तिको आँधी उठ्यो । रगतको खोलो बग्यो । बलिदानको लस्कर लाग्यो । र, जनजनको क्रोध र आक्रोश, आर्तनाद र कोलाहल, प्रहार र आखेटको बीचमा खुनी राजा पुच्छर टाङमुनि लुकाएर भाग्यो । ऊ सिंहासनबाट बाहिरतिर भाग्यो । ऊ वस्तीबाट वनतिर भाग्यो । र, हर्षोन्मादको बीचमा क्रान्तिको नायकले उद्घोष ग¥यो- देश अब गणतन्त्र भयो । प्रजा अब नागरिक भयो । व्यवस्था अब राजाका हिंस्रक पन्जाबाट मुक्त भयो । नागरिक अब निरङ्कुशतन्त्रको नियन्त्रण र निधेषबाट, छेकछुन र बन्देजबाट, वञ्चना र वर्जनाबाट मुक्त भयो । त्यो क्षण, दीर्घ यत्न र दीर्घ प्रतिक्षापछि आएको जीवनको त्यो क्षण मेरालागि अमूल्य थियो । त्यो क्षण आइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो जीवनभरिको सपना थियो । जब त्यो सा“च्ची नै आयो, मलाई त त्यो सपनाजस्तो लाग्यो ।
राष्ट्रपति नामक प्रेतको जब सडकमा सवारी हुन्छ, बन्दुकको बलले ऊ धर्ती र आकाश कब्जा गर्छ । प्रधानमन्त्री नामक प्रेत जब सडकमा निस्कन्छ, बन्दुकको बलले ऊ धर्ती र आकाश कब्जा गर्छ । र, सिंहासनबाट फालिएको भूतपूर्व राजा फुस्रा ओठ चाट्दै गम खान्छ-त्यस्तो त मैले नै गरेको थिएँ । त्यस्तै गर्ने हो भने तिनले भन्दा राम्रो त मै गर्छु । यसो कान थापेर सुन्नु, इतिहासको मसानघाटमा राजतन्त्रको नलीखुट्टो बोल्न थालेको छ । त्यो भन्दो छ- अब म सिंहासनमा फर्किन्छु ।
पहिले जात र परम्पराले, जन्म र वंशले, लिङ्ग र धर्मले कुनै जुगाँमुठे हरिप राजा हुन्थ्यो । अब राजा नहुँदाको रिक्त स्थानमा राष्ट्रपतिको उदय भयो । जनमतले रोजेको, विधिले बाँधेको, धुलीकणबाट उठेको पात्र राष्ट्रपति भयो । विजयी मुद्रामा लोक प्रसन्न थियो । गर्वको भावनाले लोकको शीर ठाडो भएको थियो । लोकको बक् फुटेको थियो । र, जनसाधरणलाई लागेको थियो-अब भने जीवन जीवनजस्तो हुनेछ । जागेका जनताले रोजेको शासक अब भने जनताको सेवक हुनेछ । अब शासक र शासितमाझको दूरी छोटिँदै जानेछ, असमानता हट्दै जानेछ । र, जीवन शनैःशनैः समानता र न्याय, समुन्नति र सुखको लोकतान्त्रिक जगमाथि उभिने छ । तर कल्पनालोकमा आशा थियो एउटा, कठोर यथार्थमा भयो अर्कै । सत्ताको गद्दामा राजतन्त्रको प्रेतवायु प्रकट भयो ।
जनजनका काँधमा बोकिएर सत्ताको गद्दीमा उकालिनु के थियो, राष्ट्रपतिको मुद्रा परिवर्तन भयो । प्रधानमन्त्रीको बोली बटारियो । र, हेर्दाहेर्दै, अहिलेको अहिले राष्ट्रपति राजाजस्तो देखियो, प्रधानमन्त्री राजाको अरौटे जस्तो भइदियो । दुबै स्वेच्छाचारी र अहंकारी । दुबै भ्रष्ट र दुष्ट । दुबै फजुलखर्ची र विलासी । दुबै भदौमासको जङ्गली अर्नाजस्ता । मैमत्त र मदमत्त । हेपाहा र मिचाहा । अमर्यादित र असहिष्णु । लोकका लागि राजा गयो, राजा रह्यो भनेजस्तो भयो । सत्ताका गद्दीमा भुइँफुट्टा राजारानीका प्रेतवायुहरु गजधम्म विराजमान भए । र, पुनः विश्वासघात हात लागेको लोक स्तव्ध र क्षुव्ध भयो ।
राष्ट्रपति नामक प्रेतको जब सडकमा सवारी हुन्छ, बन्दुकको बलले ऊ धर्ती र आकाश कब्जा गर्छ । प्रधानमन्त्री नामक प्रेत जब सडकमा निस्कन्छ, बन्दुकको बलले ऊ धर्ती र आकाश कब्जा जर्छ । र, सिंहासनबाट फालिएको भूतपूर्व राजा फुस्रा ओठ चाट्दै गम खान्छ-त्यस्तो त मैले नै गरेको थिएँ । त्यस्तै गर्ने हो भने तिनले भन्दा राम्रो त मै गर्छु । यसो कान थापेर सुन्नु, इतिहासको मसानघाटमा राजतन्त्रको नलीखुट्टो बोल्न थालेको छ । त्यो भन्दो छ- अब म सिंहासनमा फर्किन्छु । सत्ताको गद्दीमा यी मेरा प्रेत हुनुभन्दा यी प्रेतको म मौलिक स्वरुप हुनु कता हो राम्रो हो । कहा“को मौलिक स्वरुपको सग्लो अस्तित्व, कहाँको त्यसको नाथे प्रेतवायु ! कहाँको भव्य वटवृक्ष, कहाँको त्यसको छुसी छाया“ !
अब के हुन्छ ? विश्वासघातको आघातले आहत भएको लोक अब के गर्छ ? लोक यी भुँइफुट्टा राजारानीलाई मौलिक राजालाई झैं धूलामा पछार्न अघि सर्छ र यिनको कमारोपन स्वीकार गर्छ ? प्रश्न शून्य आकाशमा तुन्द्रुङ्ग झुण्डिएको छ । यो सन्नाटा, भयावह प्रतीत हुने यो सन्नाटा- के हो यो ? के यो सन्नाटा संग्रामी आ“धीको पूर्वाभाष हो ? म जान्दिनँ । मलाई केवल यत्ति थाहा छ- मुक्तिप्रेमी लोक यी भुइँफुट्टा प्रेतहरुको जघन्य अत्याचार झेलिरहन अभिशप्त छैन ।
महामहिम प्रेज्डेन्ड डोनाल्ड ट्रम्प मलाई क्षमा गरुन्
हरेक व्यक्ति र घर नितान्त आत्मकेन्द्रित । हरेक व्यक्ति घर…
आफ्नो सामथ्र्यबारे आफ्नोआँकलनको साइज धेरथोर मिल्दा दुःखको साइज पनि धेरथोर…
यो कसको, कस्तो फेस्टिभल ?